Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော်(ရေ)တွင် ရေငုပ်သင်္ဘောများ ပိုင်ဆိုင်လာတော့မည်လော.. အပိုင်း(၂)
တပ်မတော်(ရေ)တွင် ရေငုပ်သင်္ဘောများ ပိုင်ဆိုင်လာတော့မည်လော.. အပိုင်း(၂)
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ၆စင်းမှာယူထားပြီး အိန္ဒိယ၊တရုပ်တို့ကပါ သဘောကျလျက် ဝယ်ယူသည့်အပြင် ခိုးယူထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ရေငုပ်သင်္ဘော အမျိုးအစားသည် Kilo အတန်းအစား ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပါသည်....။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံးစနစ်များထဲမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောကြီး အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ပြီး မြေပြင်၊ရေပြင်နှင့် ဝေဟင်ပါတိုက်ခိုက်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားသော ရေငုပ်သင်္ဘောအမျိုးအစားဖြစ်သည်..။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့
နူကလိယျစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောများဟာ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံးတွေထက်
ရေအောက်မှာ အကြာကြီးနေနိုင်ပါတယ်....။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို ရေပြင်ပေါ် တက်ဖြည့်စရာမလိုလို့ပါ...။ ဒါပင်မဲ့ နူကလီယျစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ ကြီးမားတဲ့အတွက် ကမ်းခြေရေတိမ်ပိုင်းမှာ စစ်ကစားမှု မလွယ်ကူလှပါဘူး...။ ဒီအခါ လေပြန်ဖြည့်စရာမလိုပဲ တစ်လကျော်နေနိုင်တဲ့ စနစ်တပ်ဆင်ထားမယ့် ဘက်စုံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ဒီဇယ်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောများဟာ ကမ်းခြေစောင့်အနေနှင့် ကြောက်စရာလက်နက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်...။ ကီလိုအတန်းအစားများဟာ သူတို့ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်....။
Armur Class ရေငုပ်သင်္ဘောမျိုးကွဲများ
Project 877 Paltus နှင့်Project 636 Varshavyanka ဆိုပြီး (၂)မျိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၆၃၆တွေဟာ ပိုအဆင့်မြှင့်တဲ့ စနစ်ပါ...။ ပိုမိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရေပြင်၊ဝေဟင် ရေဒါစနစ်တွေပါ တပ်ဆင်ထားပြီး Water Jet ကိုပါတပ်ဆင်ထားပါတယ်...။တော်ပီဒိုပြွန်များကနေ ဝေဟင်နှင့် ရေပြင်၊မြေပြင်ပစ် ခရုစ်ဒုံးပျံတွေ ပစ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်...။ နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့တဲ့ စနစ်တွေမှာတော့ ဝေဟင်ပစ်စနစ်တွေ တပ်ဆင်မပေးထားဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...။ ဈေးကတော့ တစ်စင်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀နဲ့ ၂၅၀ကြားမှာရှိပြီး တရုပ်ကပြန်ထုတ်တဲ့ အမျိုးအစားတွေဟာ သန်း၁၅၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...။ လူအင်အား ၁၅၀ကျော်နဲ့ ၄၅ရက်တာ စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ကို မနားတမ်းထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရေအောက်အနက် မီတာ ၃၀၀အထိ ငုပ်နိုင်တဲ့အပြင် အမြန်ဆုံး တစ်နာရီ ရေမိုင်၂၅အထိမောင်းနှင်နိုင်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် အမြန်နှုန်းတစ်နာရီ ရေမိုင် ၃-၇မိုင်အားဖြင့် မိုင်၄၀၀ခန့် အကျယ်အဝန်းအထိ ဖြန့်ကျက်စစ်ကစားနိုင်ပါတယ်...။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ အစင်း၆၀နီးပါးအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး ခုထက်ထိ အမှာစာများရယူနေဆဲ ဝယ်လိုအားများတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်....။ အိန္ဒိယ၊ တရုပ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံများက ၁၀စင်းကျော် ၂၀ နီးပါစီ အသီးသီး ဝယ်ယူထားပြီး ဗီယက်နမ်က ၆စင်း ဝယ်ယူထားပါတယ်...။ ပိုလန်၊အီရန်၊ရိုမေးနီးယား အယ်ဂျီးယားနိုင်ငံများကလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်...။
Kilo နှင့် Armur အတန်းစားများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြမှု
ကီလိုအတန်းအစား ရေငုပ်သင်္ဘောများကို အောင်မြင်လိုက်တဲ့ အတန်းအစားကတော့ Lada အမျိုးအစား ရေငုပ်သင်္ဘောဘဲဖြစ်ပါတယ်...။ ကီလိုအမျိုးစားများထက် အနည်းငယ် သေးသွယ်ပြီး ပိုမိုတိတ်ဆိတ်တဲ့ စတုတ္ထုမျိုးဆက်သစ် ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်...။ Project 677အနေနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံကပဲ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀ခုနှစ်များကနေ စတင်ခဲ့ပင်မယ့် ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာမ တစ်စင်းရေချစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀မှာ ရုရှားရေတပ်က ၈စင်းမှာယူခဲ့ပါတယ်...။ သို့သော်စမ်းသပ်အသုံးပြုပြီးနောက် ဆိုနာစနစ်နှင့် ရေနက်ပိုင်းမောင်းနှင်မှုမှာ အကြိုက်မတွေ့တာကြောင့် အမှာစာများ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီ ရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်....။ ကီလိုအတန်းစားတွေက် ဈေးပိုကြီးတာကြောင့်လို့လဲ ဆိုကြပါတယ်...။ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ တရုပ်က အဲဒီအမျိုးစား သင်္ဘော၎စင်းစာအတွက် ၂ဘီလီယံဖိုးစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ ပိုင်ဆိုင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်....။ လူထက် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်များကို အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့ပြီး သင်္ဘောသားဦးရေ လိုအပ်ချက်ကို ၃၈ဦးအထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ကီလိုအတန်းစားများနည်းတူ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပေမယ့် အမြန်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်မှုကတော့ ရေမိုင် ၂၁မိုင်ဘဲရှိပါတယ်....။ ရန်သူ့ဆိုနာစနစ်ရဲ့ ဖမ်းယူနိုင်မှုကိုတော့ သိသိသာသာ ၃ပုံ၁ပုံလောက် လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး စိက်ပိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ တိတ်ဆိတ်လွန်းတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်...။ သည်အတန်းစား ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို တရုပ်ကို ရောင်းချမှုဟာ ရုရှားအတွက် စွန့်စားလွန်းရာကျပြီး အမေရိကန်လေယာဉ်တင် အုပ်စုတွေအတွက် သိပ်အန္တာရယ်ကြီးတယ်လို့ မီဒီယာတွေက ဆိုကြပါတယ်...။ တရုပ်ကတော့ သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လေယာဉ်တင်အုပ်စုမှာ အသုံးပြုမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်...။
Armur-950 နဲ့ Armur-1650 အတန်းစားများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြမှု
ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ နေရာမရတဲ့ သည်အမျိုးအစားဟာ ပြည်ပဈေးကွက်အတွက် Armur Class အနေနှင့် ပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်....။ အမျိုးအစားပေါင်း ၅မျိုးရှိပြီး Armur-950 နဲ့ Armur-1650 အမျိုးစားတွေဟာ စိတ်ဝင်စားမှု အတော်တန်ရရှိထားတဲ့ အမျိုးအစားတွေပါ...။ အီတလီနှင့် ပူးတွဲထုတ်လုပ်ဖို့ သဘောတူထားတဲ့ S-1000 အမျိုးအစားတွေဟာ Armur အမျိုးစားတွေဖြစ်ပြီး ၉၅၀တွေ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်...။ ကီလိုအတန်းစားတွေ Lada အတန်းစားတွေထက် သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီး ဝယ်ယူသူစိတ်ကြိုက် လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...။ အမြန်ဆုံး တစ်နာရီရေမိုင်၂၀ အထိသွားနိုင်ပြီး ရေအနက် မီတာ၂၅၀အထိငုပ်နိုင်ကာ ရေမိုင်၃၅၀နီးပါးကို ၄၅ရက်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...။ Armur-950 အတန်းစားတွေဟာ ၅၆မီတာသာရှည်လျှားတဲ့ သေးငယ်တဲ့ အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပြီး ဒေါင်လိုက်ဒုံးပစ်စနစ်ပါဝင်ပြီး တော်ပီဒိုများ မိုင်းများပါ သယ်ဆောင်ကာ များပြားလှတဲ့ ပစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...။ သင်္ဘောသားအရေတွက် ၂၀သာ လိုအပ်ပြီး တာဝေးစစ်ဆင်နိုင်စွမ်းနည်းပါးပါတယ်...။ ရေငုပ်သင်္ဘောသက်သက် ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့် အီလက်ထရောနစ်စစ်ဆင်ရေးအတွက် အသုံးဝင်မယ့် အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်...။ Armur-1650 တွေကတော့ ဒေါင်လိုက်ဒုံးပစ်စင်တွေ မပါရှိပါဘူး...။ တော်ပီဒိုပြွန်တွေကနေပဲ ခရုစ်ဒုံးတွေကို ပစ်ခတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး တာဝေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တာနှင့် အစောင့်လိုက်တာ ကင်းလှည်တာတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်...။ ပြင်သစ်ရဲ့ Scorpene Class ဂျာမနီရဲ့ Type214 Class တွေဟာလည်း Armur အမျိုးစားတွေနဲ့ နည်းပညာချင်းဖလှယ်ထားတဲ့ စနစ်တွေဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားနှင့် အိန္ဒိယကလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ဆိုကြပင်မဲ့ Armur အမျိုးစားတွေကို တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူအသုံးပြုဘူးတဲ့ နိုင်ငံတော့မရှိသေးပါဘူး...။ တစ်စင်းချင်းစီဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၁၀၀ နဲ့အထက် တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်....။ ကီလိုအတန်စားတွေ Lada အတန်းစားတွေနှင့် ယှဉ်ရင် အင်မတန် ဈေးသက်သာတဲ့ အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်....။
Kilo နှင့ Lada အတန်းစား နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြမှု
မြန်မာ့ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်နှင့် ကမ်းခြေလုံခြုံရေးအတွက် ကီလိုအတန်းအစား ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်...။ သို့သော် ကီလိုအတန်းစားရဲ့ မျိးဆက်ခွဲတွေဖြစ်တဲ့ Armur အမျိုးအစား တွေကိုတော့ လေ့လာသူတွေက သိသိသာသာ စိတ်ကြိုက်တွေ့ကြပါတယ်...။ အထူးသဖြင့် တာတိုစစ်ဆင်ရေးသုံး လက်နက်ပေါင်းစုံသယ်ဆောင် တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ၉၅၀တွေဟာ သင်္ဘောသားဦးရေနည်းနည်း သေးသေးသွယ်သွယ်နဲ့မို့ ပထမဦးဆုံးစတင် အသုံးပြုရမယ့် မြန်မာ့ရေတပ်အတွက် လူငယ်တွေ မျက်စိကျစရာ တစ်ခုအဖြစ် သုံးသပ်နေကြပါတယ်...။ သို့သော် တပ်မတော်(ရေ)၏ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များဖြင့် စိစစ်တိုင်းထွားကာ စနစ်တကျ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်ခုတည်းသာ ဝယ်ယူရတာမဟုတ်ဘဲ လိုအပ်သော ရေငုပ်သင်္ဘောစခန်းတွေ၊ ပြင်ဆင်ရေးတွေ၊ လက်နက်တွေ၊ စနစ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေကို စီစဉ်ရမှာဖြစ်ပြီး ကြာဦးမည့် အစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မကြာစေချင်လောက်အောင် စိတ်လောစွာ စောင့်မျှော်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်....။ သို့သော် ရေးသားခဲ့ပြီးသော ရေငုပ်သင်္ဘောအမျိုးစားများအားလုံးဟာ တစ်စင်းချင်းတန်ဖိုး ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀အထက်မှာသာရှိပြီး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ စနစ်များပါ ဝယ်ယူရမည့်အပြင် ယခုနှစ်ရရှိထားသည့် ရေတပ်အတွက် ဘတ်ဂျက် ဒေါ်လာသန်း၉၀နဲ့ ဘာကိုမှ အလောတကြီးစီမံလို့ မရနိုင်တာဖြစ်လို့ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့်ပိုင်ဆိုင်လာမည့် တရုပ်အကျ Romeo အတန်းစား (ဆိုဗီယက်လက်ကျန် တရုပ်မွမ်းမံပြင်ဆင်) ရေငုပ်သင်္ဘော ၂စင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုတော့ ရင်ခုန်နေရဆဲဖြစ်ပါတော့တယ်....။ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ....။
(မြန်မာ့တပ်မတော်(ရေ)၏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ရေငုပ်သင်္ဘောအမျိုးစားဖြစ်သော Kilo Class ရေငုပ်သင်္ဘောမျိုးကွဲများအကြောင်း အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြပေးသော ဆောင်းပါရှင်အား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ....။ ဆက်လက်၍လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဆောင်းပါးများ ဖော်ပြပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်...။)
Posted by MM at 11:48 AM
roger nge August 2, 2013 at 3:46 AM
က တော့နည်းလွန်းတယ်ဗျာ။သန်း၆၀၀လောက်ဆိုရင် မဆိုး
htun min thant August 2, 2013 at 3:48 AM
ရင်မော ရပါတယ်ကိုmm ငါတို့တပ်မတော် အတွက် အတိတ်သင်ခန်းစာယူ၍အနာဂတ်နိုင် ငံတော်အတွက်ချစ်သော အ မျှော်အမြင်ရှိသော တပ်ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွန်းဖို့ ရင်မောစွာနှင်မျှော်နေပါမည်
Anonymous August 2, 2013 at 5:12 AM
Kilo-class submarines are better than armur-class submarines.Kilo class submarines can shoot 8000 miles with cruise missiles.
Nyi M. Lwin August 2, 2013 at 9:19 PM
Submarines are too expensive to maintain and require extensive infrastructre ands technical expertise. Not to mention that they are also expensive to buy too! I believe the army should modernize the airforce first. Current new frigates show navy has better knowldege in respect to other branches of the army. But major security lies on land and air. History taught us, whoever control air supermacy, has better hand in warfare. The airforce should buy more Su-35. Western countries impose sales of arms to the army. But not Japan. Japan has both technology and capabilities, but not the right to have large army. Recent trend shows, Japan is willing to upgrade their own army as well as SEA. Take Phillpines for example.
There are many Japanese new generation fighter jets under development. The army should look forward to Japanese arms too. And also South Korea. They just started their own fighter jets.
roger nge August 5, 2013 at 2:23 PM
ကိုmmရေ ပို့စ်အသစ်က လေးတွေမြန်မြန်တင်ပေးပါဦး။
zinnwe phyo August 21, 2013 at 6:47 PM
နှစ်စဉ်ကြည်းသန်း၂ထောင် ရေသန်း၁ထောင် လေသန်း၁ထောင်$ကိုပြောတာရင် မဆိုးဘူး
sithukyaw rakhine April 18, 2014 at 8:58 AM
သူငယ်ချင်းတို့ရေ လွတ်တော်ကလည်း ဖြတ်တောက်တယ်ကွာ ကုလားတွေ လွတ်တော်ထဲက အိမ်သာလာတက်မှပဲ ဘတ်ဂျက်တိုးပေးမယ်ထင်တယ်
မြန်မာ့တပ်မတော်(ရေ)အား တိုးချဲ့ သင့်ပြီလော...
ဒုံးပျံတင်အမြန်သွား ရေယာဉ်ငယ်များ အပိုင်း-၂